Ngaphaya kweDemografi: Iindidi zesahlulo esiPhambili saBaphulaphuli esiDala ukuBandakanyeka kokuzibandakanya | Martech Zone
Enkosi nakweyiphi na inkulu okholelwa kuyo kwiMarike yokuZenzekelayo, kwaye ukuyekelela okunika abathengisi. Eyona nto iqhelekileyo, sisebenzisa ukuThengisa ngokuZenzekelayo ekubandakanyeni nasekukhuliseni izikhokelo. Oku kunokufezekiswa ngemikhankaso yedriphu, kunye nokuziphatha okubangela ukuba bathathe inyathelo. Ukudityaniswa kwemeyile lolunye uphawu oluthunyelwe ezulwini. Ithuba lokubandakanya lonke igama lomamkeli omnye kwisifundo kunye nomgca wokuqala we-imeyile yakho kukungaguquki kokuguqula-ukuhambelana ...
Inyani ayisiyiyo loo nto yokuThengisa ngokuZenzekelayo unako qhubeka kakhulu; Kukwanjalo ke iimfuno ukuya phambili ngakumbi. Ubabize ngegama labo, kodwa yonke i-imeyile yakho yi-humdrum, yenziwe-yenziwa-leyo, kwaye ayisiyiyo kwaphela. Umxholo owahlukileyo ngokwenyani ufuna okungakumbi. Ngokukodwa, kufuna ulwahlulo olucacileyo, ngaphaya kweedemografi, ukwazi abathengi, ukuqonda into abayifunayo, nokuthetha ngqo kwiimfuno zabo.
Isahlulo sentengiso sihamba ngaphaya kwamanani abantu
Ukwahlulahlula abaphulaphuli akukho nto intsha. Awu, ayisiyonto intsha ke ngoku ukuba ubuncinci obungenanto; kulindeleke kumaqela entengiso nakweyiphi na imboni. Kubandakanya ukwahlulahlulahlulahlula iqela labapapashi beshishini kumaqelana, ngokusekwe kwiimpawu ezahlukeneyo abanazo kunye neempawu ababelana ngazo. Sele uyazi ukuba yintoni, wonke umntu ukuyo. Iyasebenza kwaye amanani ayathetha.
I-76% yabathengi balindele ukuba ishishini lazi izinto abazithandayo.
Inani labantu lolona hlobo loqobo, olona luqhelekileyo kwicandelo labaphulaphuli. Kutheni bengayi kuba njalo? Bahlula abantu abahlukeneyo ngokusekwe kwiimpawu zabo eziphambili ezinje ngobudala, indawo, kunye nesini, ukubala nje abambalwa. Kodwa namhlanje, ayisiyiyo yonke into kunye nesiphelo-sayo yonke icandelo. Akwanelanga ukuvelisa ngokubanzi kunye nokwahlulahlula ngokusekwe kwinto engenamsebenzi nokuba isuka phi okanye mdala kangakanani. Oku akukhokeleli kubuntu, kufundiswa ukuqikelela. Abathengi bakho bafanelwe ngcono.
Ishishini lakho lifanelwe ngcono. Ukwenziwa komntu ngokufanelekileyo kumxholo wokufikelela kunye nentengiso kubalulekile kwimpumelelo yexesha elizayo.
Uhlobo lwe-1: Ukwahlulahlula ngokusekwe kwi-Psychographics
Apho iingcombolo zedatha esixelela khona Ngubani uthenga into, amanqaku edatha yengqondo asixelela ngoba abo bantu bayayithenga. Idatha yengqondo inokusetyenziselwa naliphi na ishishini ukuthatha inkuthazo eqhuba isimilo sokuthenga sabaphulaphuli babo. Iinkampani eziqhuba olu hlobo lophando zihlala zijonga abathengi imilinganiselo yokuziphatha, indlela yokuphila, ubume beklasi, izimvo, iinkolelo, kwaye imisebenzi yemihla ngemihla.
25 ukuya 30
Ingeniso ~ $ 25,000
Umkhweli webhayisikile onomdla kunye nomdlali webhola
Ininzi yeXesha leSpare
Ingcali eLutsha; Umsebenzi oqhutywa
I-Psychographic ivumela abathengisi ukuba banyuse ubume bokunxibelelana kwabo ziinotshi ezimbalwa. Idatha efanelekileyo, necocekileyo ehlulwe ngokulinganayo ibenza bakwazi ukuthetha ngolwimi lwabathengi babo kwinqanaba leemvakalelo, ukuqonda ngokupheleleyo ukuba imveliso isebenza njani kwaye isetyenziswa ngabo, kwaye ijolise kwiimpawu ezinomtsalane kubo. Inika umbono ongcono wokuba imveliso ingena phi kubomi babo, ibaxhobise ukuba bayilumkele imiyalezo yabo kule nto.
Njani? Ukwahlulahlulwa kwengqondo kufuna uhlalutyo lweendlela zokuziphatha zabaphulaphuli ngaphambi kokuzahlula. Isebenzisa uphando olusemgangathweni oluqhutywa ngezixhobo zokuzithandela ezinje ngesaveyi, udliwanondlebe kunye nemibuzo ukufumanisa ezinye, amanqaku athile edatha malunga nomthathi-nxaxheba ngamnye. Imibuzo inokugubungela naliphi na inani lezihloko ezixhomekeke kushishino. Umzekelo, iinkampani ze-B2B zihlala zijolise kuzo imisebenzi ekufuneka yenziwe kunye nemibuzo yophuhliso lwabathengi. Le migca yemibuzo inceda ukucacisa ukuba ungayifaka njani imveliso kwiProfayili yoMthengi efanelekileyo (ICP) yomsebenzi wemihla ngemihla, kunye nendlela imveliso yabo enokukhawulezisa ngayo iziphumo.
Khumbula. Kukho umgca ococekileyo phakathi komntu ochanekileyo kunye nokuphulwa ngokuthe ngqo kwemfihlo. Ngokucacileyo, kuya kufuneka uqokelele idatha yomsebenzisi kuphela ngemvume yabo, kodwa kuya kufuneka uqiniseke ukuba le nto uyicelayo kubo ayisiyiyo eyomntu kwaye ayingeni. Ngesi sizathu, kunokuba ngumceli mngeni ekufumaneni idatha yengqondo. Umbono olungileyo kukubonelela ngomdla othile, uluncedo, umxholo we-freemium ukubuyisela intsebenziswano, okanye ukufikelela okukodwa kwangoko kwimveliso okanye umsebenzi osandula ukwenziwa.
Uhlobo lwe2: Ukwahlulahlula ngokusekwe kwiXabiso kuMthengi
Isahlulo esisekwe kumdla sijonga ngokukodwa kuhlobo lomxholo onethemba, okhokelayo, kunye nabathengi abakhoyo ngoku abadlayo. Ukwahlulahlulwa ngokukodwa kuyilelwe ukutyhala abo basebenzisi baqhubeke ezantsi kwefaneli, ngokunganiki nto ngaphandle kwexabiso kunye nobungcali njengoko bekhangela imveliso yabo. Umzekelo, ukuba elinye lamathemba ethu lityikitye kuluhlu lwethu lokuposa kuba bekhuphele i-eBook yethu ebandayo, emva koko singazibeka kwiqela labantu abanomdla wokuthumela i-imeyile ebandayo.
Kungenxa yokuba ithemba lokufunda umxholo wakho aluthethi ukuba bazokuthenga imveliso yakho.
Isiteyitimenti esingentla siyinyani. Kodwa yonke inkqubo yokuthengisa esekwe kwixabiso isekwe ekuqondeni nasekuqiniseni izizathu zokuba kutheni imveliso yam iluncedo kwithemba. Ukuba ndithatha ingqalelo yokuba bayazikhuphela izikhokelo zam ezi-imeyile ezibandayo, baya kuthi ke babe nomdla kokuqukethwe okubanda nge-imeyile okunje ngebhlog yam yomxholo wesifundo; yam 'indlela yokufumana nayiphi na idilesi ye-imeyile' ukuhamba.
Okokugqibela, abathengisi banokuyilinganisela le ndlela yokufikelela kwaye batyhalele phambili ngakumbi kwi-faneli ngokubanika idemo ekhokelwa yintengiso yemveliso yabo. Umvuzo wabo ngumbono obonakalayo, olungeleleneyo ofunyenwe kwigalelo labo. Ukuqhubela phambili, bayakwazi ukuthumela ii-imeyile ngobuninzi kwisikali, ngaphambi kokuhlalutya ukusebenza kwabo kunye nokwenza ngcono ukusebenza kwabo ukuze bafumane amaqondo okuphendula angcono.
Uhlobo lwe3: Ukwahlulahlula ngokusekwe kwiXabiso kwiShishini
Isahlulo esisekwe kwixabiso sisicwangciso sokwahlula indawo esibeka amathemba, isikhokelo kunye nabathengi kumaqela ngokusekwe kwixabiso abanokuthi babonelele ngalo kwishishini. Ngokwesiqhelo andizukuyithathela ingqalelo le ndlela yokwahlulahlula ubuqu. Kodwa, emva kwento ubhubhane ayenzileyo kwishishini, sele iza kuba ngumahluko phakathi kwecandelo elisebenzayo nelingasebenziyo ukuya phambili.
Amandla okuthenga abe nje so -ngathethekiyo. Indlela ubhubhane kunye nokutshixeka kwayo emva koko zichaphazele amashishini ahlukeneyo kumashishini ahlukeneyo ayichani ngokupheleleyo. Umzekelo, uninzi lweevenkile zeCommerce zikhulile, kodwa iinkampani zokuhamba ziye zaguqwa. Ukuthengisa amashishini kufuneka akuqonde oku kwaye afike ngaphezulu, ukwahlula abathengi babo ngokusekwe kwindlela abachaphazeleke ngayo. Emva koko, banokunika umxholo owenzelwe wena, uvelwano kunye nokunikezela ukunceda abathengi babo.
Njani? Amashishini kufuneka aqeshe amava abathengi ancokolayo. Sukuhlala ulinde isicelo sokurhoxisa; fikelela kubathengi bakho ngayo nayiphi na imibuzo yokuthengiselana okanye iindawo zentengiso ezinokuthi zihambelane nazo. Bonisa inkxalabo, uvelwano, ubudlelwane kunye nomnqweno onyanisekileyo wokubanceda ngexesha labo lokudinga. Hlala inyathelo elinye uye phambili, kwaye akuyi kushiyeka ngasemva.
Beka iinkampani kwizibiyeli ngokusekwe kwindlela ababetheke ngayo. Ukuba baye babandezeleka, banokuthi bathambekele ngakumbi ekusebenziseni izibonelelo zesaphulelo. Ukuba bayaphumelela, banokulungela ukuthengisa iimveliso ezifanayo.
Uhlobo lwe4: Ukwahlulahlula ngokusekwe kuthethathethwano
Isifundo sokugqibela kwi Icandelo eliPhambili iklasi kukuba necandelo labaphulaphuli ngokusekwe kwindlela elizibandakanya ngayo nophawu. Yiseti yokwahlulahlula ngokwengqondo, kwaye ithathela ingqalelo indlela amathemba, izikhokelo, kunye nabathengi abakhoyo abazibandakanya nophawu kuluhlu lwamaqonga. Ngamajelo eendaba ezentlalo, amaxabiso avulekileyo, ucofa indawo, kwaye zeziphi izixhobo abazisebenzisayo ukusebenzisa umxholo wabo.
Izinto ezintathu eziphambili zokuqhuba ukubandakanyeka:
Ukuhambelana, ukuRhoqo, ukuBizela iNyathelo.
Ukuba sele uyazi ukuba ithemba lakho alivuli ii-imeyile zakho, akukho sidingo sokuchitha ixesha ngokuthumela ii-imeyile ezisixhenxe zokulandela. Ngokuzenzekelayo, unokuqaphela ukuba ithemba livula ii-imeyile zakho kodwa lingaphenduli. Kungakufanelekela ukubabeka kwiqela eliphezulu lokuzibandakanya elivulekileyo ekulandeleleni okanye elinokufuna umgca owahlukileyo wokufikelela.
Ukwenziwa komntu kuvavanyo lwe-A / B kwimigca yesifundo ukufumana echanekileyo evula evulekileyo. Yenzelwe ukunikezelwa okucokisekileyo kwimigca yesifundo ukwandisa ukubandakanyeka kwabo kunye namathuba okuguqulwa. Kuthumela ukufikelela kwi-imeyile ngexesha elifanelekileyo lokuba bayivule. Kuyithumela inani elifanelekileyo lamaxesha, ke awuyi koyisa okanye ubambe umamkeli wakho.
Njani? Amacandelo okuzibandakanya angenziwa ngokusekwe kwiziphumo zokulandela umkhondo nge-imeyile ukulandelela lonke unxibelelwano. Ngokwesiqhelo, oku kubandakanya ukusebenzisa isoftware efakela iipikseli ezincinci zokulandela umkhondo kwii-imeyile. Xa ezi pixels zokulandela umkhondo zivuliwe, ithumela isicelo sokukhuphela kwiiseva zabaxumi bokulandela umkhondo. Oku kubalwa njenge umbono. Ukusuka kuloo nto, abasebenzisi banokubona ukuba ngubani, nini, kwaye yeyiphi isixhobo umxholo wabo ovulwe kuyo.
Khumbula. Ndibhekisa ngokucacileyo kwi-imeyile kulo mzekelo kuba yiyo loo nto niche yam ilele. I-imeyile lolona hlobo luqhelekileyo lokufikelela kuluntu, ngokuqinisekileyo. Njengokuba singena kunyaka omtsha, sibona amaqonga ngakumbi nangakumbi eza eqongeni, ezinje ngeencoko eziqhubekayo, imidiya yoluntu kunye namaqonga oluntu angaphakathi. Kuya kufuneka silandelele olu nxibelelwano kunye nokugcina amava abonisa ubuqu kuwo onke amajelo ahlukeneyo.
Isahlulo sabaphulaphuli sihamba ngaphaya kwenani labantu. Ijonge ukukhuthazwa ngumthengi kunye neemeko. Kukhangeleka kule nto bayifunayo ngoko ke ungabanika oko bakufunayo. Sisitshixo sokukhula namhlanje.
tags: imisebenziukubandakanyeka kwabaphulaphuliIcandelo labaphulaphuliiinkoleloInkuthazo yomthengiulwahlulo lomthengiinqanaba leklasiulwahlulo lwexabiso lomthengilwabantuulwahlulo lwe-imeyilezokuphilaukuzenzekela ngokuzenzekelayoulwahlulo oluzenzekelayo lokuthengisaulwahlulo lwesahluloizimvoNgokwezifisoIngqondoIprofayile yengqondoulwahlulo ngokwengqondoukuthengisaisahluloamaxabiso